Garoowe: Cunidda qaadka oo laga mamnuucay xarumaha ciidanka bilayska; tababar ku saabsan anshaxa iyo xuquuqda oo gaba-gabo ah. – Radio Daljir
Garoowe: Cunidda qaadka oo laga mamnuucay xarumaha ciidanka bilayska; tababar ku saabsan anshaxa iyo xuquuqda oo gaba-gabo ah.
Garoowe, April 25 – Taliska ciidanka bilayska Puntland ayaa sheegey inaan xarumaha bilayska Puntland lagu isticmaali karin maandooriyaha qaadka.
Sidaa waxaa Daljir u sheegay madaxa tababarrada bilayska Puntland mar uu ka warbixinayey halka uu marayo tababar muddo bil ah magaalada Garoowe uga soconayey qeybo kamida ciidamada bilayska gobolada Mudug iyo Sool ee dawladda Puntland.
Daahir Maxamed Xassan, madaxa tababarrada ciidanka bilayska Puntland oo waraysi gaar ah siiyay Daljir ayaa isaga oo go’aankan cusub ee mamnuucidda qaadka ka hadlaya wuxuu sheegey in dhammaan xarumaha bilayska Puntland aan lagu isticmaali karin qaadka wuxuuna intaa ku daray in qofkii lagu helo jabinta sharcigan laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Hadalka taliyaha ayaa yimid iyada oo uu heer gabo-gabo ah marayo tababar dhinaca anshaxa suuban iyo shareecada islaamka kaas oo ay garoowe ku qaadanayeen cutubyo ka tirsan ciidamada bilayska ee gobollada Sool iyo Mudug.
Daahir Maxamed Xasan ayaa isaga oo munaasabadda iyo go’aanka cusub isku beegaya waxa uu sheegay in aan la aqabali karin in askari la baray anshaxa suuban iyo ilaalinta sharicga in uu qaad ku cuno xarumaha iyo saldhigyada ciidanka bilayska.
Tababarkan oo soo biloowday biloowgii bishan April ayaa askarta ka qayb-galaysa oo gaaraysa 100 askari waxa ay ku qaadanayaa cashiro ay ka mid yihiin anshaxa bilayska, xuquuqul-insaanka iyo shuruucda dalka. Tababarkan ayaa ka yimid amar uu horay u soo jeediyay madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole kaasoo uu faray saraakiisha ciidamada bilayska in ay tayeeyaan laamaha ciidanka bilayska.
Daahir Maxamed Xasan ayaa qiray in ay hoosayso tayada ciidamada bilayska, wuxuuna sheegay in ciidamadu ayan horay fursada ugu helin in ay helaan tababarkan oo kale. Taliyahu wuxuu intaa ku daray in ay jiri doonaan tababarro kuwaan la mida oo loo qaban doono cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada bilayska ee gobollada Puntland.
Khaladaad badan oo ka dhaca ciidanka bilayska, mararka qaarna gaara dil ayaa loo aaneeyaa in uu salka ku hayo tayo-yarida ciidanka bilayska.